Ku saabsan taariikhdeena
Tan iyo markii la aasaasay warshadda, shirkadeena waxay soo martay 12 sano iyo ka badan, waxaan ku tiirsan nahay koox tayo sare leh, qalab heer sare ah, maarayn kaamil ah oo loo dhoofiyo alaabada weelka jikada ee aan dhamaadka lahayn oo ay geedaha u weeciso dhammaan qaybaha adduunka, oo ay ku jiraan Aasiya, Afrika , Bariga Dhexe, koonfurta Ameerika ...
Sideed dareemi lahayd markaad leedahay weel tayo leh?
Sameynta quraac midab leh, qado si wanaagsan loo diyaariyey ama casho kalgacal leh naftaada, la fadhiista qoyskaaga iyo asxaabtaada oo aad la sheekaysatid, nolosha ayaa lagu miiray muuqaallada noocaas ah, taas oo dadka ka dhigaysa inay ku raaxeystaan. Goobtan jikada ee diiran oo kale, barkad wax ku ool ah oo jilicsan waa inay ahaato mid aan loo baahnayn ...
La dagaallama COVID-19
Bilowga sanadka cusub ee 2020, fayras cusub oo loo yaqaan 'corona virus' ayaa horseeday faafitaanka cudurka oof wareenka, kaasoo si xawli ah ku dheehanyahay, isla markaana si xawli ah ugu faafaya Wuhan ilaa waddanka oo dhan. In muddo ah, Wuhan iyo Gobolka Hubei waxay ku jireen xaalad deg deg ah! Dagaalkii iska caabinta ee ka dhanka ahaa faafa ayaa la bilaabay ...